Njikwa ihe mkpado, Theine na ngwa ndị ọzọ n'efu ma ọ bụ ọrịre maka obere oge | Esi m mac
Bọchị izu ụka abịaworị. Anyị na-ehihie na Fraịde na ọtụtụ n'ime unu nwere nanị awa ole na ole fọdụrụ ịhapụ ọrụ ha wee nwee ezumike ụbọchị ole na ole, izu ike na iso ndị ezinụlọ gị na ndị enyi nwee obi ụtọ. Yabụ ọ bụ oge dị mma iji lelee Map App Store maka awade na egwuregwu na ngwa. Ọfọn, n'ezie oge ọ bụla zuru oke iji chekwaa ego ole na ole, nri?
Taa, ewetara m gị nhọrọ nke aha atọ n’etiti ya bụ egwuregwu na ngwa abụọ ga-aba ezigbo uru. Mana echefula na abughi m onye Mac ma o nweghi ihe m nwere ike ime na ngwa ndia, ya na ndi mmepe ha ma obu onyinye ha choro. Ewezuga ole na ole, naanị ihe anyị nwere ike ịkwado gị bụ nke ahụ Onyinye dị ugbu a n'oge mbipụta post a, ma anyị amachaghị mgbe ha ga-akwụsị ịbụ ya n'ihi na ha anaghị ekwupụta ya. Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ha, echela nke ukwuu, zụta ya, ọ bụrụ na emesịa ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya na ị nwere ike iweghachi ya wee weghachite ego ị kwụrụ maka ya.
1 Ihe njikwa njikwa
2 Ihe nlere
Ihe njikwa njikwa
Anyị ga-ebido Ihe njikwa njikwa, nke ahụ bụ, njikwa clipboard maka macOS. Site na mbubata nke macOS Sierra na Septemba afọ gara aga, Apple webatara clipboard zuru ụwa ọnụ nke na-enye anyị ohere ịtinye na otu ngwaọrụ ihe anyị depụtaghachiri na nke ọzọ, agbanyeghị, Ihe njikwa njikwa bụ a onye njikwa nke ihe ahụ niile mgbe anyị na-edegharị na Mac na ọ ga-abakwara anyị ezigbo uru ụbọchị ọrụ niile.
Ihe njikwa njikwa na-echekwa ihe niile idetuo na macOS ka ị nwee ike iji ya ma emechaad. N'etiti ọtụtụ atụmatụ na ọrụ ya, ọ pụtara na interface ya dị mfe iji, nke na-enye gị ohere ịpinye ederede na ma ọ bụ na-enweghị nhazi, detuo na mado site na ngwa ọ bụla, nzacha ọdịnaya, leghaara ụfọdụ ngwa na ọtụtụ ndị ọzọ anya.
Ihe njikwa njikwa Ọ dakọtara site na OS X 10.11, ọ nwere ọnụahịa mbụ nke euro 3,99, mana ugbu a ị nwere ike nweta ya na mbelata 50 maka naanị euro 1,99 na Mac App Store.
Ihe njikwa njikwa2,99
Ọ bụrụ na caffeine na-eme ka ị mụrụ anya, caffeine ga-emekwa ka anya gị ghe oghe, gị na Mac gị. Nke a bụ ngwa ga-amasị onye ọ bụla nwere MacBook. N'ezie na ihe karịrị otu oge ị nụrụ banyere "Caffeine", ngwa dị mfe nke na-egbochi Mac ịrahụ ụra. Ọ ka na-arụ ọrụ zuru oke, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ dịkwaghị na Storelọ Ahịa Mac ma emelitebeghị ya kemgbe ọtụtụ afọ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ọzọ nke na-eme otu ihe ahụ ị nwere Ihe nlere.
Erikpu dị nnọọ 3,6MB, Ihe nlere na-eme ka Mac gị mụrụ anya site na igbochi ya ihi ụra, na-ebelata ihuenyo ma ọ bụ na-eme ka ihuenyo ahụ rụọ ọrụs Site na akara ngosi dị mfe na ogwe menu, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti "ịchekwa sistemụ arụmọrụ gị na-amụghị anya ma ọ bụ maka oge a kara aka."
Ihe nlere Ọ nwere ọnụahịa mbụ nke euro 0,99, mana ugbu a ị nwere ike nweta ya kpamkpam n'efu maka obere oge na Mac App Store.
Anyị na egwuregwu na-aga OsmosN'ihi na anyị Macs bụ maka fun na ntụrụndụ kwa.
Banye ụwa Osmos na-adọrọ adọrọ: Part cosmic environment simulator, akụkụ Darwinian lanarị egwuregwu. Egwuregwu a na-emeri nke ọma na-etu ọnụ maka egwuregwu egwuregwu siri ike nke physics, ihe osise nrọ, na egwu elektrọnik.
Ihe mgbaru ọsọ gị bụ itolite site na ịmịpụta obere ntụpọ, mana ịkwaga na ị ga-atụpụ ihe n'azụ gị, nke na-eme ka ị daa. Site na nguzozi a, Osmos na-eduzi onye ọkpụkpọ site na egwuregwu egwuregwu gburugburu ebe obibi, sistemụ ndị miri emi nke anyanwụ, efere Petri na-asọmpi, oghere specks, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Osmos Ọ nwere ọnụahịa mbụ nke euro 4,99, mana ugbu a ị nwere ike nweta ya maka naanị € 1,99 na Mac App Store.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Onye njikwa Clipboard, Theine na ngwa ndị ọzọ n'efu ma ọ bụ ọrịre maka obere oge
E mechiri ụlọ ahịa Apple ka ịgbakwunye nhọrọ ịzụta ngwaahịa ọhụrụ